Ireo serivisy fiara ratsy indrindra
Inona avy ireo masoivohon'ny fiara ratsy indrindra?
Amerikanina maro no mampifandray ny dia ao an-toerana miaraka amin'ny lalana misokatra sy ny dia lavitra. Tamin'ny andron'ny Fahatsiarovana 2017, ny mpandraharahan'ny AAA mihoatra ny 34,6 tapitrisa dia nitondra fiara maherin'ny 50 kilaometatra avy tao an-tranony nandritra ny fialantsasatra. Ho an'ireo 2.9 tapitrisa izay nanidina nankany amin'ny toerana fialan-tsasatra, dia maro ny saran-dalana nampidirina fiara ho anisan'ny vakansiny.
Ny maso ivoho fiara dia fiara tsy tapaka amin'ny seranam-piaramanidina manerana izao tontolo izao, ny tsirairay izay mampanantena ny mpandeha dia miara-dalana amin'ny fiara mba hitondra azy ireo lavitra. Na dia izany aza, maro amin'ireo trandrahana ireo dia manaparitaka haingana rehefa manisy fiaramanidina miafina sy mibaribary amin'ny faktioran'ny mpandeha ny serivisy fiara. Ny fandoavam-bola sy fanonerana ho an'ny fahavoazana, fanadiovana, famoahana sy ny maro hafa dia afaka mameno ny teti-bola tsy misy fanamarihana.
Iza no mividy fiara fitateram-bahoaka tokony hiala amin'ny dian'izy ireo manaraka? Araka ny fanamarihan'ny mpampiasa any amin'ny Consumer Reports tsy ara-barotra sy ny antontan'isa avy amin'ny Fianarana Fahaizana Mampifanolosoloana ny JD Power North America 2016, dia tokony hieritreritra zavatra roa ny mpandeha raha vao manofa avy amin'ireo fiara ratsy indrindra any Etazonia.
southerncalifornian / Flickr
Ny orinasa ACE Rent A Car dia niorina tamin'ny 1966 ary ny foibeny any Indianapolis, Ind., Ny orinasa ACE Rent A Car no lehibe indrindra tamin'ireo orinasan-dalamby tao Etazonia noho ny JD Power. Ny orinasa dia nahazo ny toerana ambony tao amin'ny fanadihadiana momba ny indostria 2011, narahan'ny fampiantranoana ny mpilatsaka ho an'ny mpanjifa ao amin'ny JD Power tamin'ny herintaona.
Nanomboka teo dia nisy mpitsidika nanakiana ny traikefany tamin'ny toerana 350 misy azy ireo manerana an'i Etazonia, ka nantsoiny hoe iray amin'ireo masoivoho fiara ratsy indrindra. Tamin'ny taona 2016, ny ACE dia tsy nomen'ny JD Power, miaraka amin'ireo orinasa maromaro miseho eto amin'ity lisitra ity.
Ao amin'ireo fanadihadiana 208 tavela any amin'ny Consumer Affairs, maro no mifantoka amin'ny toetry ny fiara. Milaza ny mpandeha fa maloto ny fiara, "amin'ny endrika mahantra," na amin'ny fitaovana GPS efa ela. Ny fitarainana iraisana iray hafa dia mifantoka manodidina ny saram-panafahana miafina, anisan'izany ny saram-panaovana isan'andro ho an'ny saram-pisoratana.
Alohan'ny handraisana fiaran-dalamby, ireo mpandeha dia tokony hahatakatra aloha ny saram-pandraharahana mety ho azon'izy ireo mandray andraikitra. Alohan'ny hanaiky ny zavatra voalohany amin'ny taratasy na ny rafitra nomerika, dia manazava ilay fifanarahana, ary aoka ho azo antoka fa manontany ny safidy hafa rehetra . Farany, mangataha sara-printy amin'ny fiampangana sy ny saram-panaovana rehetra, mba hahatakaranao ny fifanarahana aminao sy ny fomba amam-panao amin'ny fiaran'ny fiara.
Fiara Advantage Rent A Car
atomictaco / flickr / CC BY-SA 2.0
Matetika mifandray amin'ny vidiny ambany indrindra ho an'ny fiara mividy, Advantage Rent A Car dia iray amin'ireo orinasa fiantohana fiara ratsy indrindra araka ny fanamarihan'ny olona ao amin'ny Consumer Affairs. Fanampin'izany, ny Better Business Bureau dia nanome ity fiara fiara fiara ity ho fiantohana "F" miaraka amin'ireo famerenan-kevitra ratsy fito ary fitarainan'ny mpanjifa 500.
Anisan'ireo fitarainana mahazatra indrindra manoloana ny Advantage Rent A Car ny fanampiana ny fiatrehana fahasimbana (CDW) tsy misy fanazavana amin'ny mpanjifa. Mpividy maro no milaza fa nangataka tamim-panajana ny politikan'ny CDW izy ireo satria ny karatra fiantohana na ny fiantohana ara-pizahantany dia mandrakotra ny fahavoazana na ny fahaverezan'ny fiara lentam-piaramanidina, mba hampidirana azy any aoriana. Raha ny fanasoniavana ny fifanarahana, dia miampanga ireo mpitsoa-ponenana amin'ny fanitsakitsahana ny fanekena na ny fandavana ny mpandeha, ka miteraka fiampangana fanampiny.
Alohan'ny hanaovana sonia fifanarahana, ny mpandalo dia mila mahatakatra ny fiampangana izay ampidirina ao amin'ny kaontiny, ary koa hoe inona no fiantohana fiantohana ary tsy hafenina. Na dia misy toe-javatra sasantsasany ahafahan'ireo mpandeha sasantsasany hividy fiantohana fanampiny aza , ny ankamaroan'ny lalana ao an-tokantrano dia ho rakotra amin'ny fomba maro hafa. Raha toa ny mpiasan'ny birao dia mahery setra amin'ny fanekena ny fifanekena, dia mangataha na mitaredretra na miresaka amin'ny mpanara-maso iray mba hanazavana ny toe-javatra rehetra.
franckmichel / Flickr / CC BY 2.0
Fivarotan-tseraseran'ny iray hafa "Low cost", Fox Rent A Car dia manonona fiara ho an'ny $ 7.95 isan'andro, na fihenam-bidy lalina kokoa amin'ny alàlan'ny tranokala hafa mialoha. Na dia eo aza ny toerana misy azy ireo ho fiaraha-miombon'antoka fiara lehibe indrindra ao Etazonia, dia maro ny mpitsidika naneho ny tsy fahafam-pony tamin'ny Fox ho toy ny iray amin'ireo masoivoho ratsy fiara ratsy indrindra.
Amin'ireo sokajy 159 manamarika ny fanombohan'ny Consumer Reports, ny fitarainana mahazatra indrindra amin'ny Fox Rent A Car dia mifantoka amin'ny sanda miafina sy ny fametrahana ny fiantohana, ny sazy, ary ny mpamily faharoa. Nisy mpandeha iray nitaraina an'i Fox dia nanangona saram-panafahana fanampiny ary nitazona solika ho an'ny mpamily faharoa, raha ny iray kosa nilaza fa voampanga ho lazaina fa lozisia nendasina, izay lazainy fa tsy voatery hikorontana mihitsy.
Ireo traikefa izay sasatry ny toetry ny fiarany dia tokony hanoratra ny zava-drehetra mandritra ny fanekena . Tafiditra ao anatin'izany ny maka sary ny sarin'ny fiara, izay manamarika ny fahavoazana efa misy. Ny fahasimbana rehetra dia tokony ho raisina an-tsoratra amin'ny fifanarahana momba ny fisavana amin'ny fanamarinana avy amin'ny mpiasa iray. Ny tsy fanaovana izany dia mety hiteraka fitarainana sarobidy sy ady mafy amin'ny mpanjifa .
Fiantohana fiara tsy misy trosa
David Wirth / davewirth.blogspot.com
Ny farany amin'ireo orinasa mpanao fanatanjahan-tena tsy voalamin'ny JD Power amin'ny 2016, Payless Rentanana dia manome ny saram-pitaterana sarobidy amin'ny trano any Etazonia sy Eoropa. Raha maro ny mpandeha mianatra, ny ampahany amin'ireo vidiny ambany ireo dia matetika tonga amin'ny saram-panafahana miafina sy ny tsindry alohan'ny handoavana ny entona amin'ny vidin'ny fiantohana, ka mahatonga azy ireo ho iray amin'ireo masoivoho ratsy fiara ratsy indrindra.
Ny fitarainana mahazatra indrindra amin'ireo fanamarihana 230 tavela any amin'ny Consumer Affairs dia nivadika tamin'ny fividianana fiantohana fanampiny na alohan'ny handoavana solika. Ny sasany mitaraina dia nolazaina fa hahazo fifanarahana tsara kokoa amin'ny fividianana gazy avy amin'ny fiara fitaterana fiara ary tsy maintsy ampandoavina ny zavatra nampiasainy. Raha ny tokony ho izy, ireo mpandeha dia milaza fa voampanga ho tank iray feno solika amin'ny vidiny avo lenta kokoa noho ny any amin'ny bisy ivelany ivelan'ny trano.
Na dia mety ho tolotra mampihetsi-po aza ny fiantohana ny fampiasana gazy dia milaza ny manam-pahaizana fa tsy hitranga mihitsy izany. Ireo tra-boina izay te-hiantoka antoka fa tsy voampanga amin'ny entona hafa izy ireo dia tokony handrotsaka ao anatin'ny 10 kilaometatra amin'ny fiverenan'ny fiara , ary mitazona kopia amin'ny tapakila ho porofo novolavola solika alohan'ny fiverenany.
Ceedave / Flickr / CC BY-NC-ND 2.0
Raha nifanaraka tamin'ny fividianan'i Chrysler, ny Dollar Thrifty Automotive Group dia naneho ny orinasam-piofanana roa ratsy indrindra an'ny JD Power tamin'ny 2016. Nahazo valisoa 764, raha ny 774 monja ihany no nampiakatra an'i Dollar - ambany ny 804 indostrian'ny indostria.
Ny fitarainana mahazatra indrindra amin'ireo fanamarihana 126 ao amin'ny tranonkala dia ny fikarakarana ny lozam-pifamoivoizana. Ny mpandeha izay nanofa tamin'i Dollar na Thrifty dia nilaza fa noraisina ny fandoavam-bola isan'andro ho an'ireo mpanelanelana. Raha ny marina dia maro tamin'ireo lalana ireo no nanolotra volan'ny banky, na dia teo aza ny fanirian'ny mpiasan'ny birao, fa tsy nampitandremana tamin'ny fampitandremana momba ny fandoavana ny lozam-piaramanidina rehetra.
Rehefa mikasa hanao dia lavitra ny mpandeha mandinika dia mandinika ny ampahany rehetra amin'ny làlany mba hahatakatra ny zavatra mety ho hitan'izy ireo mandritra ny androm-piainany. Na dia manofa mpandidy aza ny mpindrana dia mety ho mora kokoa ho an'ireo izay mivezivezy eny an-dàlana izany, mety tsy ny safidy tokana ho an'ny mpandeha lavitra.
atomictaco / Flickr / CC BY SA 2.0
Ny Budget Rent-A-Car no fiatoana fahatelo ratsy indrindra nahazo ny fiara mpitondra fiara tamin'ny 2016 JD Power Survey, namoaka tsangambato sy Dollar noho ireo teboka folo. Raha oharina amin'ny salanisa indostrialy, ny Budget dia nahatratra 20 ny ambany, noho ny antony hita taratra amin'ny fitarainana tavela ao amin'ny Consumer Reports.
Amin'ny 306 ratings, ny olana momba ny fanompoana mpanjifa no tena olana indrindra amin'ireo mpandeha tsy tapaka. Ny mpanjifa taloha dia nitondra tao amin'ny tranonkala tsy mitady tombontsoa hitaraina momba ny traikefa manomboka amin'ny famerenana ny fiantohana amin'ny fiantohana, mba "hohavaozina" tsy misy ny fahalalany na ny fifanarahana mba handoavana ny tahan'ny isan'andro.
Raha toa ka miezaka miala amin'ny seranam-piaramanidina ny mpandeha, dia zava-dehibe ny mamaky ny printy tsara rehetra ary mahatakatra ny zavatra rehetra ampangaina azy ireo alohan'ny handao ny saran-dalana. Ireo izay tsy dia maika rehefa teraka dia tokony handinika ny fisotron-dronono avy amin'ny tranokalam-pivarotana mialoha ny toerana mba hamonjena ny vola ary hahazo fitarainana mpanjifa tsaratsara kokoa. Any ivelan'ny seranam-piaramanidina, ireo mpandeha dia afaka misoroka ny haba, ny surcharges ary ny fampiakarana saram-pandrosoana kely sy ny faharetana.
demond_henderson / Flickr / CC BY-NC-ND 2.0
Farany amin'ny lisitra dia azo antoka fa ny anarana lehibe indrindra amin'ny serivisy fiara: Avis. Raha toa ity marika manerantany ity dia natsangana ho fiara ratsy indrindra ho an'ny fiara liam-pivarotan-tseraseran'ny fanadihadiana tamin'ny taona 2016 tamin'ny fanadihadiana JD Power tamin'ny 795, ny Money Magazine koa dia nahita azy ireo ho lafo indrindra fiara fiara fiara amin'ny vidiny isan'andro amin'ny $ 60.
Ny fanamarihana 194 momba ny Consumer Affairs dia mifantoka amin'ny olana lehibe roa miaraka amin'i Avis: ny serivisy mpanjifa sy ny fiara. Amin'ny alalan'ny fitarainana, mitaraina ireo mpanao dia lavitra fa ny vidim-piainana nokaramain'izy ireo dia tsy mifandray amin'ny traikefa tsara kokoa rehefa manofa na mamerina ny fiarany, miaraka amin'ny sara miafina tafiditra ao anatin'izany ny saram-pandrenesana mirefarefa am-bava sy miafina. Ny fitarainana hafa dia miampanga ny orinasa fanofana fiara izay tsy nodiovina, nahitana taratra mazava, na nanana fitaovana tsy dia tsara. Ny fanadihadiana tamin'ny 2016 JD Power dia nahatsikaritra fa olana goavana teo amin'ny orinasam-pivarotana fiara, satria 21 isan-jaton'ny mpandeha no nitatitra olana tamin'ny fiarany. Ny 16 isan-jaton'ireo fitarainana dia niodina nanerana ny fitaovana tsy ilaina, anisan'izany ny GPS sy ny mpanelanelana.
Ny mpivahiny izay tsy afa-po amin'ny famandrihana dia manana fomba maro hahazoana fahafaham-po amin'ny fanofana azy. Alohan'ny fitsangatsanganana dia manoro hevitra ny manam-pahaizana amin'ny fanaovana ny asam-pikarakarana ao amin'ny orinasa mpanao fanofana ary mamerina mamaky hevitra mialoha ny diany Ho an'ireo izay miatrika olana amin'ny fiara lany, ny manam-pahaizana dia manoro hevitra mba hiantso mivantana ny orinasam-pivarotana hamaha ilay olana, na hamerina ilay fiara amin'ny toerana izay nanofana azy mba hifanakalozam-pananana.
Na dia miatrika fotoan-tsarotra sy sarotra aza ny fiatrehana olana amin'ny fiara dia tsy voatery mihemotra ny mpanao dia lavitra noho ny tranga iray. Amin'ny alàlan'ny fisorohana ireo sampan-draharaham-piofanana fito mahatsiravina sy mahatsapa ireo tricks ireo, ny mpandeha dia tsy afaka mividy fanampiny ho an'ny fiantohana, raha te hiresaka amin'ny mpandika lalàna, na mandoa fanampiny noho ny zavatra inoany fa "maimaim-poana".
Izay rehetra tokony ho fantatrao alohan'ny handoavana ny RV voalohany
Tokony hividy fiaran-dalamby ve ianao amin'ny alàlan'ny tranokalan'ny antoko fahatelo?
Inona no tokony hataonao raha miala ny fiaran'ny fiara
8 Fahadisoana fiara iombonana
Torohevitra ho an'ny fividianana fiantohana fiara
Fomba fiasan-dalana iray any Eorôpa
Ahoana no hialana amin'ny Stockholm mankany Malmo any Soeda
Fantaro ny valan-javaboahary lehibe ao Nevada
Ahoana ny fomba hanatrehana antoko dihy Rosiana
Ny fitsidihana ny tendron'ny fanaraha-maso ny vatolampy
Hafatry ny Andro Eran-tany Cleveland
Fomba tsara indrindra handehanana andro dimy mahafinaritra ao Oahu
Aiza no hanodinana ordinatera sy elektronika ao Brooklyn, NY
Mandeha Country O'Keeffe - Ilay Art, ny Vehivavy ary ny Tendrombohitra New Mexico
Solomon R. Guggenheim Guide Visitors Guide
Paska any Londona: Ny hetsika tsara indrindra an'ny tanàna isan-taona
Manana tolotra tsara ve ny Dining World Free an'ny World World?
Las Vegas Weather: Rahoviana no fotoana tsara indrindra handehanana any Las Vegas?